China High quality Square Pipe Glass Dropper Liquid Foundation Bottle factory na suppliers | Jiamei
Elu àgwà Square Piel Glass Dropper Liquid Foundation Bottles
Ike: 20ml, 30ml, 40ml
Ebe mbido: Shanghai.Lianyungang, Ningbo
Akara: Printing ngwaahia Logo
Square Piel Glass dropper Liquid Foundation karama
silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba，ratinggba ihe ịchọ mma na usoro ndị ọzọ
Zuru okè maka Liquid Foundation
DHL, Fedex, UPS, Ibu ikuku, Ibu Oké Osimiri
Dị ka gị arịrịọ
A na-eji iko dị elu, nke nwere gburugburu ebe obibi mara mma, na-agbakwunye ụkpụrụ ogo obodo. Ọ na-aga na dropper, na e nwere ọtụtụ nke dị iche iche nke jel isi droppers. Nwere ike ịhọrọ dị ka mmasị gị, kpọtụrụ ndị ọrụ nlekọta ndị ahịa. Ihe mkpuchi siri ike nke okpu na-egbochi mmetọ. Ọnụ kalama ahụ na-agbaso imewe eri ma kwekọọ ọnụ iji gbochie leakage nke mmiri mmiri. Ejiri ala nke karama ahụ mee ihe na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbochi, na-eme ka ala nke karama ahụ sie ike. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma maka ijide serum, ndị na-ehicha aka, ihe otite, wdg
Nkọwapụta nke karama transperent mmiri mmiri bụ 20ml, 30ml na 40ml. Y nwere ike ịhọrọ nkọwapụta dịka mkpa gị si dị. Anyị ụlọ ọrụ nwere silk ihuenyo, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, ebi akwụkwọ na agba, decorating firing na ndị ọzọ Filiks. Anyị ga-e copyomi foto ị nyere zuru oke iji hụ afọ ojuju gị. Anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ntụpọ na-eche maka nhazi nhazi gị.
1. Agba customization: mkpa iji nye sample ma ọ bụ Pantone agba nọmba
2. Printing customization: mkpa inye CDR / AI format ebi akwụkwọ akwụkwọ
3. Usoro: elu okpomọkụ ihuenyo ebi akwụkwọ / na-ekpo ọkụ zọ ọlaọcha / electroplating UV / sanding / ịgba agba
Ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwere ike ịnye gị ihe nlele ahụ maka gị iji gosi ụdị nke ikpeazụ. N'ihi na anyị nwere ihuenyo obibi, na-ekpo ọkụ zọ, frosting, labeelu, na-ebi akwụkwọ na agba na ndị ọzọ na Filiks, otú anyị nwere ike hazie dị iche iche okwu na ihe nakawa etu esi maka you.Please kpọtụrụ ahịa ọrụ maka nkọwa. Mgbe nke ahụ gasị, ị na-akwụ ụgwọ nkwụnye ego ahụ, anyị ga-ewepụta ngwaahịa ahụ n'ọtụtụ dịka ihe nlele ahụ. N'ikpeazụ, a na-ezitere gị ngwaahịa ahụ ma nyefee gị ka ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ mgbe ịnabata gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ịchọrọ ịjụ, ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ọrụ ndị ahịa anyị, ha ga-aza gị. Anyị ga-eji obi gị niile jeere gị ozi ma nwee olile anya iru gị na ịkọ ọnụ.
Nke gara aga: Elu àgwà square ekpe iko mmiri mmiri na ntọala karama na oké ala
Osote: N'ogbe okomoko Ewepụghị Jirinụ Isi Glass efu Epekele